Sheekh Muusaa Su’aalaa Jechuun beekkaman… – Welcome to bilisummaa
Sheekh Muusaa Su’aalaa Jechuun beekkaman…
bilisummaa April 17, 2014	Leave a comment
Sheekh Muusaa Su’aalaa Jechuun beekkaman.
Ulamaaii Umrii waggaa 40 ol barsiisuun dabarse keessaa tokko. Amata 40 barsiisuu malee damooza gaafatee hin beeku.
Akkasuma Sheekhootii hedduu barsiisee jira. Hawaasa bal’aaf Muhaadaraa adda addaa qopheeysanii gorsunis dalagaa Isaaniiti. Bid’aa fii Shirkii irraa hawaasa qulqulleeysuuf carraaqqii guddaa godhaa ture, arrallee itti jira.
Sheekh Muusaa Hassan maqaa Su’aalaa jedhu kana kha argate osoo barnootarra jiruu akka tahe himama. Osoo baratanii hoggaa darasoota wajjiin qo’atan gaafii jajjabduu gaafatuun beekkama. Achirraa ka’uun Sheekh Muusaa Hassan jechuu hafee Sheekh Muusaa Su’aalaan beekkame.
Su’aala jechuun Gaafii jechuudha.
Ahbaashii saaxiluun ummataaf ibsee jira.
Seenaa Sheekh Muusaa Su’aalaa waan beeytu itti guuti.
Previous Gunmen kill nine in western Ethiopia bus attack – state media
Next Master plani amma Wayyaaneen baafte Finfinnee babaldhisuuf otoo hin ta’iin Oromiyaa daangaa daangaan adda qoqqoduu..
As the world of the 21 st century began to take history seriously by pulling …